Goorma ayey tilmaame qaab loo baahan yahay tahay? | Abuurista khadka tooska ah
Tilmaamaha qaabka waa uun soo koobid macluumaad ah Dhammaan walxaha sameeya astaan ​​u adeegta aalad lagu hago wixii horumar ah ee la doonayo in laga fuliyo hareeraheeda, had iyo jeer muhiim maahan, sidaa darteed maanta waxaan ka hadli doonnaa goorta loo baahan yahay hage qaab.
1 Sidee loo ogaadaa in hagaha qaabku yahay lagama maarmaan?
2 Maxay tahay in hagaha qaabku ku daro?
2.1 Sawirka sumadda waa in la qeexaa
2.2 Qiimee xulashooyinka astaanta
2.3 Go'aaminta farta
2.4 Qeex midabada
2.5 Qeexida walxaha guud qaarkood
2.6 Muhiimadda go'aaminta kala dheereynta
2.7 Ku dayasho sida loo isticmaalo astaantaada
Sidee loo ogaadaa in hagaha qaabku yahay lagama maarmaan?
Waxay ku xirnaan doontaa inta koox shaqo ee milkiilaha astaanta uu soo xushay, si loo horumariyo walxaha kala duwan ee ka dhigi doona, qaab fudud, haddii kuwa mas'uulka ka ah naqshadeynta ay ka dhigayaan hal koox si loo abuuro astaanta, bogga, xayeysiinta , iwm., Aynu nidhaahno jiritaanka hagaha si adag ugama maarmi lahaa maaddaama loo qaatay kooxdu waa inay u shaqeysaa si waafaqsan si walxahaas oo dhami ay isugu mid noqdaan fariinta isku mid ah mid walbana waa qeyb ka mid ah guud ahaan.
Si kastaba ha noqotee, haddii macmiilku uusan rabin inuu wax uga tago fursad, hagaha qaabka ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan tahay.
Dhinaca kale, haddii kooxo shaqo oo kala duwan loo xulay mid kasta si loo horumariyo qayb ka mid ah astaanta, jiritaanka hage qaab ayaa muhiim ah si koox walba ay u hesho macluumaadka lagama maarmaanka ah una ogaato waxa la kala qaadanayo si ay si isku mid ah ugu sameeyaan kooxaha intiisa kale isla markaana sawirka astaanta marwalba loo xoojiyo.
Maxay tahay in hagaha qaabku ku daro?
Marka hore, hagahani waa inuu noqdaa mid aad u jilicsan, had iyo jeerna u daaya suurtagalnimada hal-abuurnimo u furan kuwa adeegsada, ee ka shaqeysa bixinta tilmaamaha, si loo calaamadiyo wadada la raacayo iyadoon la xadidayn geedi socodka hal abuurka iyo had iyo jeer ka tagista furitaanka xulashooyinka si loo ballaariyo loona hagaajiyo markii loo baahdo; intaas oo dhan iyadoo si cad loo qeexayo waxyaabaha muhiimka ah ee astaanta sida oo kale, si aqoonsigu uusan u lumin.
Si looga dhigo waxtar badan, hoosta waxaan kuu soo gudbineynaa talooyin aad maskaxda ku hayso si aad uga dhigto hagahaaga qaabka ugu waxtar badan ee suurtogalka ah:
Sawirka sumadda waa in la qeexaa
Sawirku waa tallaabada ugu horreysa, si loo qeexo waa inaad ku tiirsanaataa astaanta shirkadda halkaasna laga bilaabo, adoo tixgelinaya tartamayaasha, Calaamadeynta iyo waxaad rabto inaad gudbiso, illaa aad ka hesho sawirka ku habboon waxa aad rabto.
Qiimee xulashooyinka astaanta
Tani waa inay la xiriirtaa siyaabo kala duwan astaanta ayaa loo isticmaali doonaaTusaale ahaan, haddii midab ahaan doono iyo in kale, cabbiraadda la oggol yahay oo kuxiran duruufaha; marka la soo koobo, dhammaan tilmaamaha lagama maarmaanka ah si aasaaska astaantu u lumin.
Marxaladdan geedi-socodka ah, qaab-dhismeedka sawirka waa in lagu qeexaa, waxa muhiimka ah ee lagu dejinayo hagaha, goorta la isticmaalayo iyo goorta aad isticmaali karto inta kale farta la ogol yahay, cabirka, midabada iyo qaababka, kuwee loo adeegsado cinwaanada, qoraallada dhaadheer, iwm.
Koodhadh kasta oo ka mid ah midabbada loo adeegsaday astaanta, labadaba saldhigga iyo xulashooyinka kale, waa in lagu ogeysiiyo hagaha qaabka.Haddii aad rabto inaad ballaadhiso xulashooyinka, waxaad soo bandhigi kartaa kuwa kale ee sare ee ku darma kuwa ugu waaweyn.
Qeexida walxaha guud qaarkood
Si ay u dejiso tilmaamo si loo horumariyo astaanta, wuxuu qeexayaa midabada, cabirka sawirrada iyo walxo kale oo hagaya naqshadeeyaha.
Muhiimadda go'aaminta kala dheereynta
Isku day inaadan khalad ka galin kuwa badan markay hoos u dhigayaan faraqa, dooro inaad go'aamiso kala dheereynta astaantaada oo leh xuduudaha iyo kuwa waxyaabaha kale ee muhiimka ah.
Ku dayasho sida loo isticmaalo astaantaada
Maaddaama sumadda loo adeegsan doono websaydhka, baloogyada, kaararka, boorsooyinka, iwm., Waxaa muhiim ah in hagaha uu ku jiro tusaalooyin cad oo ah halka horay loogu dhigayo sawirka, isagoo baranaya meelaha ugu fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Goorma ayey tilmaame qaab loo baahan yahay tahay?
Sidee loo sameeyaa dalag deg deg ah Photoshop?